Pokémon Duel dia eto, ny lalao Pokémon vaovao ho an'ny iOS | Vaovao IPhone
Betsaka no efa nanadino ny rehetra tabataba manodidina an'i Pokémon Go, iray amin'ireo lalao voalohany an'ny goavambe japoney, Nintendo, ho an'ny tontolon'ny fitaovana finday. Ary io karazana kilasika fampiononana video io no tsy hita tao amin'ny iDevices. Lalao izay nataonay tamin'ny fahazazantsika ary mitondra anay ireo mpilalao Pokémon sariaka.
Eny, ho avy Pokémon vaovao, lalao vaovao miaraka amina dinamika hafa noho ny Pokémon Go be mpividy indrindra, inona no vaovao Pokémon Duel, lalao paikady izay handanianao ora sy ora maro. Aorian'ny fitsambikinana dia lazainay aminao ny antsipiriany rehetra momba ity lalao vaovao an'ny Pokémons mahafinaritra ity ...
Mazava ho azy fa voalohany hilazako aminao izany Ao amin'ny US App Store ihany no misy Pokémon Duel, saingy antenaina fa hanomboka amin'ny App Store hafa rehetra izy afaka andro vitsivitsy. Miaraka amin'i Pokémon Go isika dia hilalao a Birao virtoaly miaraka amin'ny Pokémon 6 izay tadiavinay hiadiana amin'ireo Pokémon enina an'ny mpanohitra anay. Izany hoe manana tabilao amin'ny fomba fanaovana chess madio indrindra isika, izay ahafahantsika mamindra ny Pokémon antsika, raha vao mihaona amin'ny Pokémon an'ny mpanohitra antsika izy ireo dia hiady hanohy ny dia mankany amin'ny faritra hafa amin'ny tabilao.
Eny, samy manana ny tanjany ny Pokémon tsirairay, ary ny tsirairay dia afaka mandray dingana maromaro hankanesana any amin'izay alehany, araka izany tsy maintsy mampiasa paikady tsirairay Pokémon stratejika ianao (misafidiana zotra hafa hahatratra ny faran'ny tabilao na hampiasa azy ireo hanakanana ny lalan'ny Pokémon hafa). Lalao vaovao izay manatevin-daharana ny lisitry ny kilasika console ho an'ny finday, ho hitantsika rehefa alefa manerantany izy io ary raha mahatratra ny lazan'ny Pokémon Go ny fahavaratra lasa teo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Pokémon Duel dia eto, ny lalao Pokémon vaovao ho an'ny iOS
Ho tonga ao amin'ny Apple Watch ihany koa ny "Theatre Mode" an'ny tsaho